Duqa magaalada Galdogob oo ku baaqay gurmad deg deg ah & biya-dhaamis loo sameeyo reer guuraaga. – Radio Daljir
Duqa magaalada Galdogob oo ku baaqay gurmad deg deg ah & biya-dhaamis loo sameeyo reer guuraaga.
Galkacyo, Mar 14 – Cabdi Sahal Maxamed Xirsi, Duqa magaalada Galdogob ayaa sheegay in ay soo wajaheen reer guuraaga miyiga hoosyimaada degmada Galdogob ee gobolka Mudug biyo iyo baad la’aan.
Md. Xirsi waxaa uu sheegay in illaa hadda aanay jirin xoolo u le’eday oon iyo baad la’aan, balse ay xaaladu khatarteeda leedahay.
Waxaa uu sheegay in dhul badan oo ku tiirsanaa baraagaha biyuhu ay hadda biyihii ka gureen, ayna u baahan yihiin gargaar deg deg ah.
Waxaa uu sheegay in guddiga abaaraha ee gobolka iyo hay’aduhuba ay biya-dhaamis iyo gargaar ka wadaan degmada, balse baahida jirta awgeed loo baahan yahay in la siyaadiyo gargaarka dadka ay baaruhu saameeyeen.
Waxaa uu ugu baaqay hay’adaha samafalka, dawlada, shacabku in ay iska-kaashadaan daryeelka dadka reer miyiga ah ee ay baaruhu saameeyeen.
Degmooyinka kale ee gobolka Mudug sida Jariiban, Xarfo, iyo Bacaadweyn ayaa sidoo kale laga soo sheegay in ay ka jiraan abaaro saameeyey nolosha reer guuraaga ku nool gobolka; gobollada kale ee Puntland iyo Somaliya ayaa si siman, haba ku kala liiteene, ay u saameeyeen abaaruhu.